Tetika efatra ho an'ny baterin'ny telefaona Android | Androidsis
Mamitaka ny batterin'ny telefaona Android anao
Ny bateria dia iray amin'ireo singa ao amin'ny Android izay manome hevitra betsaka indrindra. Satria lafiny iray izay misy toerana malalaka hanatsarana izany ary mitady tetika foana izahay hahafahana manatsara ny fizakan-tenany sy ny asany. Ho fanampin'izay, mila mandray ny lafiny maro amin'izany isika rehefa mividy smartphone vaovao, araka izay efa nasehonay anao.
Atorinay anao ny andiam- fika tsy fantatry ny mpampiasa loatra, fa izany dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny bateria amin'ny finday Android. Zavatra mety ilaina amin'ny fotoana rehetra, koa ho an'ireo izay mila torohevitra rehefa mandeha dia.
1 Fidirana avy amin'ny fikirana haingana
2 Amboary ny isan-jato mba hampiatoana ny fitehirizana bateria
3 Atsaharo indray ny telefaona
4 Iza amin'ireo fampiharana no mandany bateria betsaka indrindra
Fidirana avy amin'ny fikirana haingana
Raha te hiditra amin'ny menio bateria ianao amin'ny fotoana rehetra, mba hanatanterahana ny fikirakirana na ny fanamarinana dia azonao atao ny miditra aminy avy amin'ny fikirana haingana amin'ny telefaona Android anao. Zavatra tena mora entina izy io ary afaka manampy antsika amin'ny fotoana iray hafa. Inona no tsy maintsy ataontsika?
Asehoy ny menio fanovana haingana, ilay miseho eo an-tampon'ny efijery. Avy eo, tsindrio ary tazomy ilay sary famantarana ny bateria na ny mpamonjy bateria izay hita eo amin'ny efijery. Amin'izany fomba izany dia miditra mivantana amin'ireo toerana misy azy ianao. Ho vitanao ny manatanteraka ny fanovana izay nilaina teo.
Amboary ny isan-jato mba hampiatoana ny fitehirizana bateria
Ny finday Android misy antsika maodely fitehirizana herinaratra, izay efa nolazainay taminareo tamin'ny tranga taloha. Izy io dia zavatra azontsika ampidirina anaty tanana, fa azontsika atao koa ny manamboatra. Ny azontsika atao dia ny mampihetsika azy ho azy rehefa tonga amin'ny ambaratonga manokana ny isan-jaton'ny bateria. Zavatra mety mahasoa antsika amin'ny fotoana maro.
Ny zavatra mahazatra dia ny fampandehanana azy rehefa mahatratra 15% ny bateria, saingy azontsika atao ny manova azy io eo amin'ny sehatry ny finday Android. Amin'izay dia mifanaraka amin'ny toe-javatra misy antsika io. Noho izany, tsy maintsy miditra amin'ny fikirakira telefaona isika ary avy eo mitady ny fizarana bateria.
Ao anatiny no ahitantsika ny safidy hamonjy angovo na bateria. Miditra isika, ary ny iray amin'ireo safidy hivoaka dia ny ahafahana mampihetsika azy ho azy. Ataontsika izany, ary avy eo mifidy ny isan-jato tianay izahay izay mandeha ho azy eo amin'ny fitaovantsika. Araka izany, amin'ny manaraka fa ho tonga io isan-jato io dia hampavitrika.
Atsaharo indray ny telefaona
Tahaka ny manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny finday Android vahaolana amin'ny olanao maro, koa azonao atao ve ny manampy anay amin'ny bateria. Tsy zavatra handeha hanao fahagagana izy io, fa ny famerenana amin'ny laoniny ny telefaona amin'ny fahita matetika dia afaka manampy antsika hanatsara azy io. Hatramin'ny hiafarantsika amin'ny fizotrany sy ny rindranasa izay mety tsy mampiasa azy io. Ka zavatra mety hiasa amin'ny tranga maro io.
Iza amin'ireo fampiharana no mandany bateria betsaka indrindra
Toy ny ahafahantsika manamarina izay rindranasa misy ireo mihinana angona bebe kokoa, afaka manao toy izany koa isika amin'ny bateria. Afaka mahita ny fanjifana ataon'ny tsirairay amin'ireo rindranasa izay ananantsika amin'ny Android. Fampahalalana tena ilaina izany. Satria mety misy rindranasa izay tsy tena ilaina na manana safidy hafa tsy dia mihinana firy.
Ny hany sisa ataonao dia mandeha mankany amin'ny fikirana amin'ny telefaona Android anao. Ao anatin'izy ireo dia tsy maintsy mandeha any amin'ny toeran'ny bateria isika ary avy eo dia miditra ny faritra antsoina hoe fampiasana bateria. Amin'ny telefaona sasany dia azonao io safidy io ao amin'ny menio fanovana lehibe. Ao anatin'ity safidy ity dia tsindrio ireo teboka telo mitsangana ary avy eo dia safidinay ny safidy ahafahana mampiseho ny fanjifana ny rindranasa.
Hanao izany isika manana fifehezana ny fandaniana ireo rindranasa ireo izay ananantsika amin'ny finday Android ataontsika. Fampahalalana iray manan-danja, izay hanampy antsika amin'ny fotoana maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Mamitaka ny batterin'ny telefaona Android anao
Ny vaovao rehetra an'ny Pokémon GO amin'ity Krismasy ity